Ihe Omume Ihe Omume Kantu
Ma ị na-arụ ọrụ na iwepụta data ego ma ọ bụ ndepụta ọnụọgụ site na ebe nrụọrụ weebụ e-commerce nzuzo, Kantu bụ nhọrọ kasị mma maka gị! Maka ndị na-anụ ọkụ n'obi, nchịkọta weebụ weghaara bụ usoro nke inweta ozi bara uru site na weebụsaịtị ma na-echekwa ya na ntanetị na ọdụ data.
Olee otú Kantu Editor ọrụ?
Kantu na-akpachapu data site na weebụsaịtị n'enweghị ihe ọ bụla ị chọrọ ịme. Na Kantu, ịgbanye ọdịnaya weebụ na nhazi nke ọma na ederede abụghị ọrụ jọgburu onwe ya. Nke a ihe nchọgharị weebụ bụ ihe a na-akpọkarị maka iwepụta ederede site na Pọpọ Akụkụ Nhazi (PDF) na vidiyo.
A na-echekwa data wepụtara na ọdịdị nke faịlụ CSV ma ọ bụ dee ya na data data site na Usoro mmemme nke Kantu (API). Kantu na-enye ndị ahịa ahịa aka ịchọpụta na ịkọwapụta data ka a na-ese ha. Iji nhichapu ihe ntanetị weebụ a dị mfe. Iji wepu data sitere na ebe nrụọrụ weebụ site na iji kantu ọkachamara, na-eme ka esemokwu pink dị iche iche maka akara data ezubere iche.
Kantu Editor na-eji Nyocha Akara Anya (OCR) iji wepu ihe ọmụma site na isi HTML gị. OCR bụ ụzọ dị elu nke na-arụ ọrụ iji kpochapụ faịlụ PDF, vidiyo, na foto dị elu.
Ntak emi Họrọ Kantu Editor?
Kantu Editor bụ otu n'ime ngwaahịa kachasị elu maka iji nyocha weebụ. A na-eji nchịkọta akụkọ a mee ihe maka iche iche. Nke a bụ ihe ndị kachasị mkpa ị ga-atụle Kantu maka ọrụ ntinye akwụkwọ weebụ gị.
Kantu Editor na-abịa na atụmatụ ndị dị ka mmemme, edemede, na macros. Na Kantu, ị nwere ike wepu data sitere na weebụsaịtị site n'ịhazi njirimara ya iji kwekọọ na mkpa gị na nkọwa gị.
Ikwesighi ịmuta otu esi arụ ọrụ na nke a ma ọ bụ asụsụ mmemme dịka ngwá ọrụ na-ejikọta na asụsụ niile nke mmemme.
Akụrụngwa PDF na OCR
Maka ozi gị, Kantu Editor bụ nanị ihe ntinye ihe ntanetị weebụ nke gụnyere nke mejupụtara OCR atụmatụ. Na Kantu, iwepụta data sitere na vidio na PDF dị ka igwu egwuregwu vidio.
Ụzọ iji Kantu
Nyochaa usoro iwu - A na-eji ihe nchọgharị weebụ eme ihe iji nyochaa ọganihu nke ọnụ ụzọ azụmahịa. Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ahịa dị na weebụ, Kantu na-enye gị ohere nyochaa iwu ndị e mere na nkọwa ngwa;
Lelee ma nyochaa ahịa nke ngwaahịa dị iche iche;
Nwelite usoro na ọnụego mgbanwe ọnụahịa;
Na nbudata ma zoputa data n'ime akwukwo ozi;
Nyochaa ozi bara uru site na iji OCR;
Sochie ala nkata;
Kantu bụ weebụ bara uru ngwá ọrụ nchapu nke na-ewepụ data sitere na weebụsaịtị ma na-echekwa ya na mpempe akwụkwọ na faịlụ CSV. Ọ bụrụ na ọbịbịa gị nke ọzọ jikọtara ya na iwepu akwụkwọ PDF na vidiyo, ị ga-atụle ihe nchọgharị weebụ Source .